Wɔbɔɔ Mmɔden Hwehwɛɛ Fahodi De Kaa Asɛm No Wɔ Greece
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Armenian Azerbaijani Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Korean Sign Language Lingala Lithuanian Malagasy Malay Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Russian Sign Language Serbian Serbian (Roman) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Twi Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Xhosa Yoruba
Minos Kokkinakis: Ɔne ne nuanom Yehowa Adansefo a wɔatwa wɔn asu ne afei ne mpanyin mfe mu.
Mfe aduɔwɔtwe a atwam no, wɔkyeree Minos Kokkinakis de no kɔɔ Greece supɔw bi a ɛwɔ akyirikyiri so; yɛfrɛ supɔw no Amorgós. Ná obedi abosome 13 wɔ hɔ. Saa bere no, na Greece ahyɛ mmara sɛ obiara nni kwan sɛ ɔbɛka Bible mu asɛm akyerɛ obi ma wasesa ne som. Enti kɔɔto baako buu Onua Kokkinakis fɔ sɛ wabu saa mmara no so, na wɔamma no anyi ne ho ano mpo na wɔtwee n’aso. Ɔmampanyin a na ɔte agua so saa bere no ne Ioannis Metaxas. Ná ɔyɛ kankabi. Onua Kokkinakis ne Yehowa Danseni a wodii kan kyeree no. Ɔhaw yi kɔɔ so fi afe 1938 kosi 1992. Saa bere no anuanom a wɔkyeree wɔn no, na wɔn dodow si 19,147. Saa mfe pii yi mu nyinaa, ɛwom sɛ na wɔhwe anuanom, de bi gu afiase de, nanso wɔde akokoduru kɔɔ so kaa asɛmpa no.
Bere a na Onua Kokkinakis rehwehwɛ tumi a ɛbɛma waka ne gyidi ho asɛm akyerɛ afoforo wɔ mmara kwan so no, na wadi mfe bɛyɛ 30. Edii mfe 50 ansa na ne nsa reka saa hokwan no. Wɔkyeree no bɛboro mpɛn 60. Supɔw ahorow a wɔde ayɛ afiase ne afiase ahorow nso, ɔde bɛboro mfe nsia na ɛdaa hɔ. Nneɛma a ɔne adansefo afoforo faa mu wɔ hɔ de, yɛnka. Bere a etwa to a wɔkyeree no no, na wadi mfe 77. Ɔmaa kɔɔto no aso tee sɛ sobo a wɔde abɔ no no mfata nanso kɔɔto no bu guu ne so, enti ɔde asɛm no kɔdan kɔɔto kɛse. Afei Asɛnnibea Kɛse no tenaa asɛm no so, nanso ewiee ase no, wobu guu ne so bio. Ɛbaa saa no, Onua Kokkinakis de asɛm no kɔdan Europe Asɛnnibea a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi Ho Nsɛm So (ECHR) sɛ wɔnhwɛ nka bi mma no na watumi anya ahofadi de asom ne Nyankopɔn. Afe 1993 no, ECHR dii asɛm no maa Onua Minos Kokkinakis. Saa bere no, na wadi mfe 84. Wei ne bere a edi kan koraa a ECHR no dii asɛm tiaa ɔman bi sɛ, fahodi a ne manfo wɔ sɛ wɔdɔm ɔsom biara a wɔpɛ no, wɔatiatia so. * Wosii saa gyinae titiriw yi no, afe 2018 pɛpɛɛpɛ na edii mfe 25. Mmara ho ɔbenfo baako kyerɛwee sɛ, sɛ mmaranimfo, atemmufo, ne nsɛnkyerɛwfo reka gyinae titiriw bi a ECHR asi afa hokwan a obiara wɔ sɛ ɔdɔm ɔsom biara a ɔpɛ ho a, ebia nea wɔbɛtaa atwe adwene asi so ne Onua Kokkinakis de no.
Onua Kokkinakis asɛm no abɛyɛ sɛnnahɔ ama nsɛm foforo a ɛtete saa. Ɛsɛ sɛ yɛkɔ so kae asɛntitiriw yi efisɛ nnɛ aban ahorow bi a wɔwɔ tumi te sɛ Russia pɛ sɛ wogye hokwan a yɛn nuanom wɔ sɛ wɔsom asomdwoe mu no fi wɔn nsam.
Wodii Onua Kokkinakis ani nanso ɔkɔɔ so ara kaa asɛm no. Ne gyidi ne n’akokoduru no yɛ nhwɛso ma anuanom a wɔrehyia ɔtaa no. Esiane sɛ ɔkɔɔ so dii nokware nti, otumi dii nkonim wɔ asɛnni mu. Ɛnnɛ yɛn nuanom renya n’asɛnni no so mfaso.—Romafo 1:8.
^ nky. 3 Minos Kokkinakis wui January 1999.
Share Share Wɔbɔɔ Mmɔden Hwehwɛɛ Fahodi De Kaa Asɛm No Wɔ Greece